Fikarohana momba ny firaisana Fikarohana Reincarnation an'i Ian Stevenson ao amin'ny Oniversite any Virginia & Fahatsiarovana ny Fiainan'ny Ankizy Amin'ny Ankizy - Fikarohana Reincarnation
Fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao an'i Ian Stevenson ao amin'ny University of Virginia & Children's Past Life Memories
Fandrosoana amin'ny fikarohana momba ny firaisam-pinoana: fanomezam-boninahitra an'i Ian Stevenson
Bibikely hafa, Fiainana hafa nataon'i Gordon Keirle-Smith: Boky natao hanentanana ny fahatsiarovana ny fiainana taloha
Dr. Ian Stevenson, MD, izay maty tamin'ny 2007, dia talohan'ny departemantan'ny sampana fitsaboana aretin-tsaina ao amin'ny University of Virginia, School of Medicine. Nomem-boninahitra ihany koa izy ho profesora Carlson of Psychiatry tao amin'io andrim-panjakana io. Nanomboka tamin'ny 1961, nandritra ny efapolo taona, ny Dr. Stevenson dia nanadihady ireo ankizy izay mahatadidy tampoka ny fiainana taloha izay azo hamarinina. Ny ankizy dia nofidiny tsy hianatra afa-tsy noho ny fiheverany fa tsy dia mamorona fahatsiarovana fiainana taloha ny ankizy. Jim Tucker, MD dia naka ny toerany ho an'ny Dr. Stevenson ao amin'ny University of Virgina.
Hatramin'ny taona 2018, Dr. Tucker dia nitantara tamiko fa i Stevenson sy ireo mpiara-miasa aminy dia nanangona tranga mihoatra ny 2500 ”momba ny fitadidiana fiainana. Tamin'ny 1567 tamin'ireo tranga ireo dia nampiavaka ny fiainana taloha ny fikarohana. Amin'ny tranga 150 hafa, ny toetra taloha dia "voafaritra" an-tsokosoko.
Araka izany, araka ny hevitro, ny isan'ireo traikefa an-tsarimihetsika efa niainan'ny ankizy taloha dia ny tsara indrindra amin'ny isa 1567.
Ny ankamaroan'ny tranga Stevenson dia avy any Azia, India na faritra hafa izay ekena ny fotopampianarana momba ny vatana vaovao indray. Any amin'ny toerana izay tsy rafitry ny finoana ekena ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia heverina fa manakana ny fanehoan'ny ankizy fahatsiarovana taloha ny fiainana ny zaza. Ny tranga momba ny fahazazana nodinihan'i Ian Stevenson dia manana lamina iraisana, voamarika amin'ireto fiasa manaraka ireto:
1. Raha vantany vao afaka mifampiresaka ilay zaza, dia manomboka mamaritra ny fiainana teo aloha ilay zaza. Matetika ny zaza dia manambara fa ny anarany dia tsy mitovy amin'ny anarana nomen'ny ray aman-dreny biolojika azy. Ny zaza dia manizingizina fa ny fianakaviana ankehitriny dia tsy tena fianakaviany, fa ny tena fianakaviany dia mipetraka amin'ny vohitra na tanàna hafa. Ilay zaza dia mahatadidy ny anaran'ny olona isan-karazany ao amin'ny fianakaviana sy ny toerana misy azy, hatramin'ny taloha. Ny endrika ara-batana amin'ny trano taloha sy ny manodidina dia mety ho tadidy. Ao amin'ireo andiana tranga nataon'i Dr. Stevenson, ny salan'isan'ny taona izay anombohan'ny zaza miresaka momba ny androm-piainany taloha dia 3 taona ary ny salan'isan'ny taona rehefa tsy miresaka momba ny taloha intsony ny ankizy dia 7. 5 taona.
2. Mahatsiaro ny antsipiriany momba ny fahafatesany ilay zaza nandritra ny androm-piainany teo aloha. Ao amin'ny manodidina ny 66 isan-jaton'ny trangan-javatra momba ny zaza teraka tamin'ny taonan'i Dr. Stevenson, nisy fahafatesana na herisetra nitranga tany aloha teo. Ny Dr. Stevenson dia nahatsikaritra fa ireo olona maty noho ny ratram-po, toy ny bala na ratra amin'ny antsy, matetika dia teraka amin'ny fahatongavana ho nofo miaraka amin'i Ny marika na ny marika izay manenika ny ratra izay nitranga tamin'ny lasa teo aloha. Amin'izao fotoana iainan'ny amin'izao fotoana izao, mety misy ny ankizy hihorohoro mihitsy mifandray amin'ny antony nahafatesan'ny olona taloha. Voamarina fa ny ankizy izay mahatsiaro fahafatesana mahery setra taloha, 35 isan-jato dia manana trobia mifandraika amin'ny antony fahafatesana.
3. Mifototra amin'ny fampahalalana nomen'ny zaza ho an'ny fianakaviana biôlôjika, ny famaritana ny fianakavian'ity zaza ity hatramin'ny farany. Rehefa manomboka voalohany ity fianakaviana ity ilay zaza, dia afaka mamantatra ny olona ao amin'ny fianakaviana amin'ny anarany na amin'ny fifandraisana ny ankizy. Matetika ny ankizy no mahafantatra tsiambaratelo ara-pianakaviana izay fantatry ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana teo aloha ihany. Vokatr'izany, matetika ny fianakaviana hatramin'ny ela no manaiky fa zaza vao teraka indray ny havany maty.
Ny ray aman-dreny biolojika ao amin'ny zaza ao anatin'io zaza vao teraka io matetika dia matahotra fa ny zaza dia handao azy ireo ho an'ny fianakaviany avy amin'ny fampodiana talohan'ny nahaterahana, satria ny fifamatorana eo amin'ny ankizy sy ny fiainam-pianakaviana taloha dia lasa matanjaka. Tsy mitongilana izany tahotra izany, satria ny fifamatorana eo amin'ny zaza sy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no miaritra. Ny fifandraisana maharitra kosa dia mitohy eo amin'ny ankamaroan'ny zaza sy ny fianakaviana hatramin'ny andro niainany.
4. Ny toetra mampiavaka ny tena manokana, ny zavatra tiany manokana, ary ny fahazarana dia matetika mitoetra hatrany amin'ny fampodiana iray hafa.
5. Matetika ny lahy sy ny vavy no mijanona tsy miova. Ao amin'ny 90 isan-jaton'ny trangam-panafody Dr. Stevenson, miverina mihevitra ny lahy na vavy mitovy amin'ny taloha ny zaza. Noho izany, amin'ny folo isan-jaton'ny tranga dia miova ny lahy sy ny vavy amin'ny androm-piainany iray hafa. Ny fanamarihana fa ny fiovan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny 10 isan-jaton'ny tranga indray vao teraka dia afaka mitondra fahitana momba ny fifanambadian'olo-mitovy, ny transsexuallism ary ny olana momba ny maha-lahy sy vavy.
6. Ny endrika ivelany dia mety hitovitovy amin'ny fiainana iray manontolo
Ny tranga Stevenson dia mampiseho fa ny fisehoana ara-batana dia afaka mijanona tsy miovaova amin'ny nofo iray hafa ka hatramin'ny iray hafa. Tranga roa manokana no mampiseho amin'ny fomba mahasosotra ny fisehoan'ny endrika tsy miova mandritra ny androm-piainany iray hafa. Ian Stevenson nianatra Suzanne Ghanem ary Daniel Jurdi tamin'ny faramparan'ny taona 1960, fony izy ireo mbola kely. Hita ny sarin'ireto olona ireto avy tamin'ny fahatongavany ho nofo taloha. Stevenson dia niverina nitsidika an'i Suzanne sy Daniel tamin'ny 1998 ary nahita fa ireto olona roa ireto, izay efa olon-dehibe izao, dia nanana endrika mitovy amin'ny endrik'izy ireo taloha. Ireo tranga ireo dia navoaka tao amin'ny bokin'i Tom Shroder, Old Souls. Tranga reincarnation Ian Stevenson roa hafa, izay misy ny fampitahana ny sary (ary omena ankavanana) izay mampiseho endrika mitovy amin'ny endrika: Burmese Twins
Tao amin'ny boky, Aiza no misy ny fiverenan'ny vatana vaovao sy ny biôlôjika, Dia nanoro hevitra i Dr. Stevenson fa ny mpikaroka dia mandalina tsy tapaka ny "endrika mitovy eo amin'ny olom-baventy sy ny mombamomba azy taloha."
7. Ny fifandraisana dia havaozina amin'ny alalan'ny firaisana amin'ny vatana vaovao
Araka ny nomarihina etsy ambony, ny tranga Stevenson dia mampiseho ny fitoviana ara-batana Burmese kambana, izay rahavavy tamin'ny fiainany taloha. Anisan'ny a fianarana ahitana kambana kambana 31, izay niaina an-tsakany sy an-davany ny fiainany taloha. Ao amin'ny 100% amin'ireo tranga ireo, ireo kambana ireo dia nanana fifandraisana naharitra ela teo amin'ny fiainana, nampiseho amin'ny fomba mazava fa ny fanahy dia mamolavola ny fiainana ho tafaraka amin'ny olon-tiana amin'ny alalan'ny vatana vaovao indray.
8. Ny ankizy dia mahatsiaro ny fandehan-javatra eo anelanelan'ny fiainana andavanandro. Ao amin'ny 20 isan-jaton'ny tranga Stevenson, ny ankizy dia mitatitra ny fahatsiarovana ny zava-nitranga teo anelanelan'ny androm-piainan'ny tontolon'ny fanahy. Ireo tatitra ireo dia hita ao amin'ity tranonkala ity eo ambanin'ny sokajy:
Ny mahaliana, ny fizotry ny mediana eo amin'ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray taloha dia ny 16 volana na ny taona 1.5. Ny halavan'ny salanisan'ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray dia 4.5 taona. Fa ireo raharaha momba ny harerahana amin'ny famonoan-tena Ao anatin'ny androm-piainany teo aloha, ny fotoana fanelanelanana eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahaterahana indray dia volana 3 monja.
Society for Exploration Scientific
Te hizara ihany koa aho fa nanana fotoana hitsidihana an'i Dr. Stevenson tao amin'ny University of Virginia ao Charlottesville tamin'ny taona 2001. Mpandray be fitiavana izy ary nandany tontolo andro niaraka tamiko. Tena natahotra aho fa tamin'ny famaranana ny fitsidihako dia nanolo-tena izy hanohana ahy ho mpikambana ao amin'ny Society for Exploration Scientific, fikambanana akademika izay niara-nanorina azy. Niditra ho mpikambana tao amin'ny SSE aho ary nanoro hevitra izany fikambanana izany.
Manana trosa betsaka amin'i Dr. Stevenson izao tontolo izao noho ny asa lehibe nataony nandritra ny asany lava be. Amin'ny alàlan'ny tranonkalantsika, ReincarnationResearch.com, sy ny fikambananay, ny Institute for the Integration of Science, Intuition and Spirit, izahay dia manantena ny hiorina amin'ny anjara birikiny ary ho toy ny fihetsika fanajana sy fankasitrahana, loka iray momba ny Reincarnation Reincarnation izay nomena an'io Dr. Stevenson. Araka ny nomarihina, ny fikarohana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao dia mitohy ao amin'ny University of Virginia eo ambany fitarihan'ny Jim Tucker, MD.
Ny fikarohana nataon'i Reincarnation an'i Ian Stevenson dia natolotra ho toy ny tantaram-piainan'ny zaza ao amin'ny vatana vaovao
Ian Stevenson. MD dia nanoratra tamin'ny fomba akademika tena izy, satria ny mpahay siansa mpiara-dia aminy no kendreny. Ao amin'ny tranonkala ReincarnationResearch.com, ny tranga niainany taloha dia aseho toy ny tantaram-piainan'ny zaza ao amin'ny vatana vaovao mba hanamora ny fahatakarany ny asany akademika. Ho an'ireo izay liana amin'ny fankasitrahana ny fikarohana ara-tsiansa, toy ny fampiasany vavolombelona marobe mba hametrahana fijoroana vavolombelona voamarina, azafady azafady ny tatitra voalazan'ny Dr. Stevenson.
Ny tranga fitadidiana ny fiainana taloha dia voamarina tao amin'ny University of Virginia, miaraka amin'ireo tranga hafa momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, mamela antsika hahatakatra ny fomba fiasan'ny vatana vaovao indray. Raha te hahalala bebe kokoa dia mankanesa any: